အီတလီနိုင်ငံမှာဟယ်လိုဝင်း | Absolut ခရီးသွားခြင်း
Isabel | 16/04/2021 11:05 | အဆင့်မြှင့်တင် 16/04/2021 12:05 | italia
အီတလီပြက္ခဒိန်တွင်ဖော်ပြထားသောအရေးကြီးဆုံးနေ့ရက်များမှာနိုဝင်ဘာ ၁ ရက်တွင်ကျင်းပသောသူတော်စင်များနေ့ (Tutti i Santi ဟုလည်းခေါ်သည်) နှင့်သေလွန်သူများနေ့ (Il Giorno dei Morti) ဖြစ်ပြီးနိုဝင်ဘာ ၂ ရက်တွင်ကျင်းပသည်။ ဤပွဲတော်များသည်ဘာသာရေးနှင့်မိသားစုသဘောသဘာဝအရပွဲတော်များဖြစ်ပြီးထိုတွင်မရှိသေးသောသူများကိုအောက်မေ့ရန်အသင်းဝင်များမှစုဝေးကြသည်။ ဘုရားသခင်အားရိုသေလေးမြတ်ခြင်းကိုဝန်ခံခြင်းငှာ၎င်း၊
ပွဲတော်နှစ်ခုစလုံးကိုခရစ်ယာန်အစဉ်အလာရှိသောနိုင်ငံများရှိသော်လည်းနည်းများဖြင့်ကျင်းပကြသည်။ Anglo-Saxon နိုင်ငံများတွင်ဟယ်လိုဝိန်းပွဲကိုကက်သလစ်အမွေအနှစ်နိုင်ငံများတွင်သူတော်စင်များနေ့နှင့်စိုးလ်များအားလုံးနေ့တွင်ကျင်းပသည်။ လာမယ့်ပို့စ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤမေးခွန်းကိုနှင့်အီတလီနိုင်ငံမှာဟယ်လိုဝိန်းကျင်းပပုံကိုလေ့လာကြမည်.
1 Saints All Day ကိုအီတလီမှာဘယ်လိုကျင်းပသလဲ။
2 All Souls 'Day ကိုအီတလီနိုင်ငံမှာဘယ်လိုကျင်းပသလဲ။
Saints All Day ကိုအီတလီမှာဘယ်လိုကျင်းပသလဲ။
Tutti i Santi ၏နေ့သည် Il Giorno dei Morti နှင့်အခြားနေ့ရက်များဖြစ်သည်။ နို ၀ င်ဘာ ၁ ရက်နေ့တွင်၊ သူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုအထူးနည်းလမ်းဖြင့်အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့သူများအတွက်သေဆုံးခဲ့သူ၊ သန့်ရှင်းသူအပေါင်းတို့သည်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းခံပြီးသည့်နောက်ဘုရားသခင့်မျက်မှောက်တော်၌ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌နေထိုင်လျက်ရှိကြသည်။
All Souls 'Day ကိုအီတလီနိုင်ငံမှာဘယ်လိုကျင်းပသလဲ။
အစိုးရသတ်မှတ်ထားသောရုံးပိတ်ရက်ဖြစ်သည်။ ထိုနေ့အရုဏ် ဦး တွင်ကွယ်လွန်သူကိုချာ့ချ်များနှင့်ကျန်တစ်နေ့တာအတွက်အောင်ပွဲခံသည်၊ အီတလီလူမျိုးများသည်ပန်းများသယ်ဆောင်ရန်သင်္ချိုင်းများသို့တက်ရောက်သည် သူတို့နှင့်အတူသူတို့ကွယ်လွန်သွားသောဆွေမျိုးများ၊ အထူးသဖြင့်ခရစ္စမတ်စ်ပွဲတော်များကိုရိုသေလေးစားပြီးသူတို့ချစ်မြတ်နိုးရသူများ၏သင်္ချိုင်းများကိုကြည့်ရှုကြသည်။ ဒီနေ့နို ၀ င်ဘာ ၂ ရက်နေ့မှာဖြစ်ပျက်ပြီးသေခြင်းတရားရဲ့မှတ်ဉာဏ်ကိုမှတ်မိပြီးဘုရားသခင်ဘက်ကနေသူတို့ကိုကြိုဆိုဖို့ဘုရားသခင်ဆီဆုတောင်းဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, အီတလီလူမျိုးများကမကြာခဏ "ossa dei morti" ဟုလူသိများသည့်ရိုးရာပဲပုံကိတ်မုန့်ကိုချက်ပြုတ်လေ့ရှိသည်။ ဒါ့အပြင်မကြာခဏ "သေလွန်သောသူတို့သည်၏ကိတ်မုန့်" ဟုခေါ်တွင်သော်လည်း သူသည်ယနေ့ခေတ်မိသားစုအစည်းအဝေးများတွင်သူအမြဲရှိနေသည်၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်သေဆုံးသွားသူသည်ထိုနေ့တွင်စားသောက်ပွဲသို့တက်ရောက်ရန်ဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ထုံးတမ်းစဉ်လာအရမိသားစုများသည်စားပွဲကို ပြင်၍ သွားသူများအတွက်ဆုတောင်းရန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသို့သွားကြသည်။ မိသားစုများဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှပြန်လည်ရောက်ရှိသည်အထိစိတ်ဝိညာဉ်သည်အိမ်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်နှင့်အစားအစာကိုမည်သူမျှမထိရန်တံခါးများကိုဖွင့်ထားသည်။
Siciliaဤဒေသရှိသူတော်စင်အားလုံး၏ညတွင်ကွယ်လွန်သူ၏မိသားစုသည် Martorana နှင့်အခြားသကြားလုံးအသီးများနှင့်အတူကလေးငယ်များအတွက်လက်ဆောင်ပေးလိုကြသည်ဟုယုံကြည်ရသည်။
Massa Carraraဖြေ - ဒီပြည်နယ်မှာဆင်းရဲတဲ့သူတွေကိုအစားအစာဖြန့်ဝေပြီးဝိုင်တစ်ခွက်ပေးတယ်။ ကလေးများသည်မကြာခဏပြုတ်သောသစ်အယ်သီးနှင့်ပန်းသီးများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောလည်ဆွဲများကိုပြုလုပ်ကြသည်။
Argentario တောင်တန်း။ နို ၀ င်ဘာလ ၂ ရက်နေ့ညတွင်သူတို့၏ဝိညာဉ်သည်အသက်ရှင်သောလောကသို့ပြန်သွားလိမ့်မည်ဟုထင်သောကြောင့်သင်္ချိုင်းတွင်ဖိနပ်စီးရန်ဖြစ်သည်။
အီတလီတောင်ပိုင်း၏လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း၌တည်၏ ဂရိ - ဘိုင်ဇင်တိုင်းဓလေ့ထုံးတမ်းစဉ်လာအရသေဆုံးသွားသူများကိုဂုဏ်ပြုချီးကျူးဂုဏ်ပြုခြင်းများကိုဥပုသ်မစတင်မီသီတင်းပတ်များကပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ငါအရင်လိုင်းများမှာပြောခဲ့သကဲ့သို့, ဟယ်လိုဝိန်းကို Anglo-Saxon အစဉ်အလာနိုင်ငံများတွင်ကျင်းပသည်။ ဤအခမ်းအနားသည်နွေရာသီကုန်ဆုံးချိန်နှင့်ရိတ်သိမ်းရာသီကုန်ဆုံးချိန်နှင့်နှစ်သစ်သည်ဆောင်း ဦး နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးနှင့်တိုက်ဆိုင်သည့်အချိန်၌ကျင်းပခဲ့သောရှေးဟောင်းဆဲလ်တစ်ပွဲတော် Samhain တွင်စတင်ခဲ့သည်။
ထိုအချိန်မှာ သေလွန်သူများ၏ဝိညာဉ်များသည်ဟယ်လိုဝိန်းညတွင်နေထိုင်သူများအကြားလမ်းလျှောက်နေသည်ဟုယုံကြည်ရသည်, အောက်တိုဘာလ 31 ရက်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ကွယ်လွန်သူနှင့် ဆက်သွယ်၍ ထွန်းလင်းတောက်ပသောဓလေ့ထုံးစံများကိုပြုလုပ်ပြီးအခြားကမ္ဘာသို့သွားနိုင်သည့်ဖယောင်းတိုင်တစ်ခုကိုထွန်းညှိရမည်။
ဒီနေ့ဟယ်လိုဝင်းပါတီဟာမူရင်းနဲ့လုံးဝကွဲပြားခြားနားတယ်။ အကယ်စင်စစ်သင်သည်ရုပ်ရှင်ထဲတွင်မရေမတွက်နိုင်သောကြိမ်မြင်ကြပြီ! ယခုဟယ်လိုဝိန်း၏သဘာဝလွန်အဓိပ္ပာယ်ကိုဘေးဖယ်ထားလိုက်ပြီဖြစ်သည် တစ် ဦး အပျော်အပျက်သဘာဝတရား၏အခမ်းအနားမှလမ်းပေးပါအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဖို့ဖြစ်တယ်။
လူအများစုသည်အိမ်တွင်းပါတီပွဲများအတွက်ဝတ်စားဆင်ယင်သည်သို့မဟုတ်သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူနိုက်ကလပ်များသို့ထွက်သွားပြီးပွဲလမ်းသဘင်ပွဲများကိုပျော်ရွှင်စွာကျင်းပကြသည်။ ဤအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရအရက်ဆိုင်များ၊ ကဖေးများ၊ ဒစ်ကော့စ်နှင့်အခြားဆိုင်များသည်အဆောက်အအုံအားလုံးအားပါတီ၏အဓိကဆောင်ပုဒ်နှင့်အလှဆင်ရန်ကြိုးပမ်းကြသည်။
ဤအစဉ်အလာ၏အလှဆင်သင်္ကေတမှာ Jack-O'-Lantern ဖြစ်ပြီးမျက်နှာအပြင်ဘက်မှောင်သောမျက်နှာများပေါ်တွင်ထွင်းထားသောဖရုံသီးဖြစ်ပြီးအတွင်းပိုင်းတွင်ဖယောင်းတိုင်ကိုထားရှိပြီး၎င်းကိုထွန်းလင်းစေသည်။ ရလဒ်ကတော့တကယ့်ကိုစိတ်မကောင်းစရာပါပဲ။ သို့သော်အခြားအဆင်တန်ဆာ motif လည်းထိုကဲ့သို့သောငြီးငွေ့, အရိုးစု, လင်းနို့, စုန်းမအဖြစ်အသုံးပြုကြသည်။
ကလေးများသည်ဟယ်လိုဝိန်းပွဲကိုနှစ်သက်ကြသည်။ လူကြီးများကဲ့သို့ အိမ်နီးချင်းများကသူတို့ကိုသကြားလုံးအချို့ပေးခိုင်းသည် ကျော်ကြားသော "လှည့်ကွက်သို့မဟုတ်အားရစရာ။ " မှတဆင့် သို့သော်ယင်းတွင်အဘယ်အရာပါဝင်သနည်း။
အလွန်လွယ်ကူ! သင်၏အိမ်နီးချင်းဟယ်လိုဝင်းတံခါးကိုခေါက်သောအခါကလေးတွေကလှည့်စားမှုတစ်ခုကိုလက်ခံရန်သဘောတူရန်သဘောတူသည်။ အကယ်၍ သူသည်ကုသမှုကိုခံယူလိုပါကကလေးများသည်သကြားလုံးကိုလက်ခံရရှိသည်။ အိမ်နီးချင်းကကုသမှုကိုရွေးချယ်ပါကကလေးများသည်သကြားလုံးများကိုမပေးသောကြောင့်ပြက်လုံးအနည်းငယ်ကိုပြလေ့ရှိသည်။
Anglo-Saxon ၏ပွဲတော်ဖြစ်သော်လည်းအီတလီနိုင်ငံတွင်ကျယ်ပြန့်စွာပျံ့နှံ့ခဲ့ပြီးအထူးသဖြင့်အရွယ်ရောက်သူများမှကလေးများကဂုဏ်ပြုကြသည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့ကိုအိမ်၏ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်လှည့်စားခြင်းသို့မဟုတ်ပြုမူဆက်ဆံခြင်းကိုမြင်ခြင်းမှာအလွန်ထူးခြားသည်။
အီတလီနိုင်ငံရှိဆိုင်များသည်အခြားသူများအကြားရွှေဖရုံသီး၊ နဂါးများ၊ မြွေဆိုးများ၊ လင်းနို့များ၊ စုန်းမများသို့မဟုတ်တစ္ဆေများကဲ့သို့သောပုံမှန်ဟယ်လိုဝင်းအလှဆင်ပစ္စည်းများနှင့်အလှဆင်ထားသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Absolut ခရီးသွားခြင်း » အီတလီမှာဟယ်လိုဝင်း